စိမ်းလန်းဥယျာဉ်အဖွဲ့ (Green Garden Group)
Children Disaster risk reduction (DRR) Vocational Training
စိမ်းလန်းဥယျာဉ်အဖွဲ့ (Green Garden Group)သည် အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များထားရှိကာ ပရဟိတအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများကိုဆောက်ရွက်နေလျက်ရှိပါသည်။
၁။ လူငယ်များ၏ ပညာရေး လိုအပ်ချက်များ // အဓိကရည်ရွယ်ချက်အဖြစ် ချို့တဲ့ကျောင်းပြင်ပစာသင်ကြားရေး ပရဟိတကျောင်းများ၊ ဂေဟာများ၊ ဘကများသို့လှူဒါန်းပေးလျက်ရှိပါသည်။
၂။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ // ရေဘေးကဲ့သို့သော သဘာဝဘေးများတွင် ကိုယ်တိုင် Emergency Response Team တစ်ခုအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ကူညီလှူဒါန်းပေးခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း လှူဒါန်းနေပါသည်။
၃။ ပရဟိတလုပ်ငန်းများ ပိုမိုမြန်ဆန်ထိရောက်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ရေးအတွက် အခြားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း ပူးပေါင်းကာ (ဘိုးဘွားရိပ်သာများ၊ ဆေးရုံများ စသည်တို့တွင်လည်း) တတ်စွမ်းသ၍ လိုအပ်ချက်ရှိနေသောကဏ္ဍအသီးသီးတွင် ပါဝင်ကူညီလှူဒါန်းပေးလျက်ရှိပါသည်။
"စိမ်းလန်းဥယျာဉ်အဖွဲ့ (Green Garden Group)တွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင် လှူဒါန်းခြင်းသည် အဖွဲ့၏အမျိုးစုံလှသောလှူဒါန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို လှူဒါန်းရာရောက်ပြီး အမျိုးမျိုးသောကုသိုလ် အကျိုးများကိုရရှိနိုင်ပါသဖြင့် ကျွန်တော်/ကျွန်မတို့၏ မိသားစုအဖွဲ့တွင် လစဉ်တစ်ဦးလျှင် တစ်ထောင်ကျပ်နှုန်း (၁၀၀၀)ဖြင့် အလှူငွေလှူဒါန်းပါရန် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါသည်။”
ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွင် လစဉ်တစ်ဦးလျှင် ၁၀၀၀ ကျပ် (တစ်ထောင်ကျပ်) လှူဒါန်းလိုသူများသည် အောက်ပါ အဖွဲ့ဝင်များသို့ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
၁။ ကိုဖြိုးပြည့်စိုး - ၀၉ ၄၂၀၀၇၆၉၆၁ / ၀၉၇၉၆၇၉၄၇၀၀၊ မေးလ် - phyopyahsoe@gmail.com
၂။ ကိုဝင်းသူရိန် - ၀၉ ၄၂၁၀၅၉၃၄၁၊ ၀၉ ၉၇၃၉၃၉၉၉၃
၃။ ဒေါက်တာဖြိုးဝေမြင့် - ၀၉ ၄၂၀၂၆၅၇၇၈၊ ၀၉ ၇၉၅၄၇၄၉၉၁
၄။ ကိုလင်းထက်နိုင် - ၀၉ ၄၃၁၅၄၆၈၀ / ၀၉၇၉၅၄၈၂၅၁၁
၅။ မသဲစုမာ - ၀၉ ၄၃၀၃၉၉၃၆
၆။ မသိဂီင်္အောင် - ၀၉ ၄၂၀၀၅၀၄၉၀/ ၀၉၇၉၅၄၉၀၉၄၀၊ မေးလ် - tgaevergreen@gmail.com
၇။ ဒေါက်တာစုဝေဖြိုး - ၀၉၄၃၀၂၆၉၇၀ / ၀၉၇၉၇၄၆၂၉၁၆၊ မေးလ် - suwaiphyo@gmail.com
၈။ မ၀ါဝါနိုင် - ၀၉ ၅၁၇၃၈၄၈၊ မေးလ် - wahwnaing@gmail.com
Green Garden Group (စိမ်းလန်းဥယျာဉ်အဖွဲ့)အကြောင်းနှင့် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများအား အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အဖွဲ့ website ဖြစ်သော
စိ//www.greengardengroup.org တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Our Green Garden Group (စိမ်းလန်းဥယျာဉ်အဖွဲ့) isaNon-government organization that is organized not only with the people of the locality as well as those who are from international such as Singapore, Malaysia, Japan, American, and so on.
Let's donate monthly 1000 MMK (One Thousand Kyats)
“By donating asamember is that effect on various kinds of donations and social activities from Green Garden Group (စိမ်းလန်းဥယျာဉ်အဖွဲ့). So we invite you indeed to donate 1000 (Kyat One Thousand Only) monthly together with us and get the various kinds of merits (advantages).”
Everyone who is willing to donate 1000 MMK (Kyat One Thousand Only) monthly in our activities can contact to the following group members.
1. U Phyo Pyah Soe (Ph: 09 4200 76961, 09 79 6794700), (Email: phyopyahsoe@gmail.com)
2. Ko Win Thurein (Ph: 09 4210 59341, 09 97 3939993)
3. Dr. Phyo Wai Myint (Ph: 09 4202 65778, 09 79 5474991)
4. Ko Lin Htet Naing (Ph: 09 431 54680, 09 79 5482511)
5. Daw The’ Su Mar (Ph: 09 430 39936)
6. Daw Theingi Aung (Ph: 09 420 050490, 09 79 5490940), (Email: tgaevergreen@gmail.com)
7. Dr. Su Wai Phyo (Ph: 09 430 26970, 09 79 7462916), (Email: suwaiphyo@gmail.com)
8. Daw Wah Wah Naing (Ph: 09 5173848), (Email: wahwnaing@gmail.com)
Please see our website for more detail about the contributions and activities of Green Garden Group (စိမ်းလန်းဥယျာဉ်အဖွဲ့).
Year of founded
ရည်ရွယ်ချက် ၁။ လူငယ်များ၏ ပညာရေး လိုအပ်ချက်များ ၂။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ နှင့် ၃။ ပရဟိတလုပ်ငန်းများ ပိုမိုမြန်ဆန်ထိရောက်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ရေးအတွက် အခြားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများအား တတ်စွမ်းသ၍ဆောင်ရွက်ရန်။
Ah/604, Corner of Phaung Gyi St., and Thidar Aye St.,